Zvemagariro Reactor: 7,000 Yemagariro Kufuridzira paWakagadzirira | Martech Zone
Zvemagariro Reactor: 7,000 Yemagariro Ekufurira paWakagadzirira
NeChishanu, Gunyana 27, 2013 China, Gunyana 26, 2013 Douglas Karr
ChaCha ikambani huru yandakashanda nayo kwenguva yakati rebei pandakatanga chirongwa changu. Zvakaoma kutenda kuti ChaCha ane makore masere ekuberekwa… iyo kambani inononoka uye inogara ichifamba uye ichivandudza. Ivo havazi kambani yeMupata, saka havasi vanogara vari munzvimbo inoonekera - asi vanogara vachiomerera mumawebhusaiti epamusoro pasi rese kwetraffic. Uye nekufamba kwenguva, ndakavaona vachiunganidza yakakura kwazvo inotevera. Izvo zvinotevera kubhururuka mukana mutsva webhizinesi.
Kunyange ChaCha akabaya munharaunda yavo kuti agovane ruzivo, hapana munhu kunze kweneti aive nekuwana kwakananga - kusvika Zvemagariro Reactor. Social Reactor inzvimbo yekushambadzira iyo inobatsira mabhenji kubatana nevateereri chaivo kuburikidza nehukama nevatungamiriri vanotungamira vevanhu. Yekutanga network, inofungidzirwa yakasarudzwa kukwidziridza meseji yako uye kugadzira kubatanidzwa kwevatengi kune yako brand.
Nevanopfuura vanopfuura zviuru zvitanhatu vanopesvedzera, kusvika kwenetiweki kwavo kunoshamisa - kusvika mazana emamiriyoni evanhu. Vanokanganisa vanoongororwa kuti vaone kuti kushora hakushandiswe, meseji hadzimbotsause, uye kushambadza kunoratidzwa pachena.
Kana munhu anokonzeresa akapinda muSocial Reactor, ivo vanopihwa yakarongedzwa runyorwa rweanhasi macampaign. Iyi haisi otomatiki sisitimu iyo Social Reactor inogona kusarudza zvekusundira nekuzviitira iwe. Vafuridzi vanogona kuverenga, kuongorora uye kutora chikamu mumishandirapamwe yesarudzo yavo. Ivo vanogona zvakare kuongorora avo makomisheni - hanya neyangu sezvo ini ndichangotanga;).
Kana iwe uri munhu anofurira, Social Reactor inoda iwe pabhodhi, futi! Ivo vari kutsvaga vezvemagariro vanokurudzira vane hukama hwechokwadi nevateveri vavo. Ivo vari kutsvaga vatungamiriri munzira dzemagariro vanonzwisisa vateereri vavo. Vanoda vanhu vakangwara vanoziva kugadzira mashoko akasimba anokurudzira vateereri vavo kuti vaite. Join Vagadziri veRuzhinji Reactor ikozvino.
Tags: Chachatsvaga vanokurudzirasimbakukanganisa kushambadzirasocial media advertisingmagariro reactor
2013 Dhijitari Kushambadzira Pulse Kudzidza
Sep 23, 2015 na10:46 PM
Vangani vateveri vaunoda kujoina
Sep 24, 2015 na3:52 PM
Mhoro Alison - handina chokwadi uye kuonana kwangu hakusipo! Ungangoda kubata navo zvakananga.